-Dhacdo Shiinaha True Wireless-ka Firfircoon ee buuqa ah ee baabi'inta dhegaha-dhegaha wax-soo-saarka iyo warshada |Roman
ANC TWS Bluetooth madaxa dhegaha
Waqtiga Muusiga: qiyaastii 5.6H
Waqtiga hadalka: qiyaastii 3.6H
Waqtiga heeganka: 95H
Ku dallaca batteriga sanduuqa: 300mAh, baytariyada madaxa: 60mAh
BT8922E chipset iyo Bluetooth 5.0 si loo gaaro gudbinta degdega ah iyo isticmaalka hooseeya.
Labba Master Earbuds Xidhiidh La'aan] Tiknoolajiyadda dhawaan la horumariyay waxay u gudbisaa codka bidix iyo midig isla mar ahaantaana, mar dambe ma sii gudbinayso dhawaaq ka mid ah dhegta kale.U beddel habka u dhexeeya stereo iyo mono adoon hakad lahayn.Naqshadaynta laba-geesoodka ah waxay wanaajisaa isku xirka Bluetooth-ka, waxay kuu keenaysaa waayo-aragnimo wireless run ah oo la isku halayn karo.
Tignoolajiyada Sare ee ANC: Feed-Hogaamiyaha Dhaqdhaqaaqa ee Joojinta Qaylada Kaas oo ku siinaya xoriyad dhab ah oo ka soo baxa dhawaaqa asalka oo leh tayada maqal la xoojiyey.
Ergonomic & Customizable: Ku Haboon Kontoroolka Taabashada] dhegaha-dhegaha dyplay waxay qaataan suufka dhegta ee xumbo-ku-xidhan oo siman si ay ugu habboonaato dhegta, hubinta raaxada aadka u wanaagsan iyo go'doominta dhawaaqa sare ee jimicsiga, ciyaaraha iyo orodka xidhashada maalinta oo dhan.
Kaliya taabasho farta, waxaad u isticmaali kartaa si aad u dhaqaajiso ANC, u ciyaarto/ hakiso muusigga, u hesho/dhamayso wicitaanada.
Tayada dhawaaqa Sare: Φ13mm graphene diaphragm weyn waxay keentaa bas qoto dheer oo feera leh oo leh tafaasiisha qani ah ee codka la xafiday, taas oo ka dhigaysa in TWS laga sooco kuwa kale.
kooban , luuqad nakhshad yar oo la fududeeyay usha taleefoonka dhegta naqshad siman oo dabiici ah.
Awoodda Sare ee Nolosha Batari Dheer (60mAh hal taleefoon dhegeed, 300mAh sanduuqa kaydinta dallacaadda).
25DB ee Joojinta Qaylada Firfircoon.
1. Dami/Dami:Ka soo saar headset-ka kiiska ku dallaca[OPEN]/Ku celi sameecadaha ku dallacaada , waxay sii wadi doonaan shaqada ilaa uu batarigu ka dhamaado.).
2. Lammaanaynta: Fur kiis dallaca oo ka soo saar sameecadaha, iftiinka cas/buluug, sameecadda waa la baari karaa.Ku fur bluetooth-ka qalabka (tusaale. taleefanka gacanta) si aad u baadho oo aad u lammaaniso.Iyada oo leh "beep" marka si guul leh loogu xiro.
3. Ka jawaab wicitaanka: taabo sameecada "L" ama"R" 2 jeer si aad uga jawaabto wacitaanka.Sida "beep".
4. Xir wicitaanka(Ma diidi): taabo sameecada "L" ama"R" 2 jeer si aad u xirto wicitaanka.Sida "beep".
5. Play Music Play/hakis:taabo sameecada "L" ama"R" 2 jeer si aad u ciyaarto ama aad u hakiso.
6. Habka baabi'inta qaylada/Habka hufan: Dherer dheer ku dheji sameecadaha "L" ama"R" 2 ilbiriqsi si aad u bedesho qaabka.
Hore: Dhagaha dhegaha ee Wireless-ka ee runta ah oo leh kiis dallacaad bir ah oo bannaan, daahitaan hoose
Xiga: Dhagaha-dhegaha TWS oo leh daahitaan hoose
Qaylada Firfircoon ee Joojinta Dhagaha-dhegaha Wireless-ka
Qalabka dhegaha ee Bluetooth 5.0, Bluetooth Mono Headset, Taleefannada Dhagaha ee Gudaha, Budhadhka dhegaha ee buuqa baabi'inaya, Dheecaanka Bluetooth oo leh Mic, Taleefoonnada dhegaha ee Bluetooth-ka ee bilaa-la'aanta ah,